Tierra, naEloy Moreno: simba rekukochekera, kureruka uye kutanga | Zvazvino Zvinyorwa
Tierra, naEloy Moreno
Muna 2020, munyori wechiSpanish Eloy Moreno akapa novel rake Pasi, nyaya yehama mbiri nevimbiso yababa vavo kwavari. Iyo zano inoratidzira inoshamisira nyika iri kumashure kweterevhizheni uye varaidzo muchirongwa chinoonekwa pasi rese. Pakupedzisira, munyori anoshandisa rungano runonetsa kuratidza hukama huri pakati penyaya mbiri idzi.
Vamwe vanyori vekutsoropodza vakasimbisa iwo chaiwo iwo manyorerwo uye echinyakare stylistic hunhu hwerino razvino uno. Uye hazvisi zvishoma. Neichi chikonzero, Pasi inomiririra nzira ine hungwaru yekusvika muverengi kune yakaoma uye inopesana nemamiriro emunhu.
1 Zvinyorwa zveTierra, naEloy Moreno
1.1 Mutambo watangazve
2.1 Bhuku nezve izvo zviripo zvevanhu
2.2 Chinyorwa chinonakidza chekufungisisa kwakadzama
3 Pfungwa pamusoro pebhuku
4 Nezve munyori, Eloy Moreno
4.2 Mabhuku aEloy Moreno
Zvinyorwa zve Pasirakanyorwa naEloy Moreno
Murume ane simba rakawanda mu terevhizheni uye indasitiri yevaraidzo anoita vimbiso isingawanzoitika kuvana vake vaviri vadiki, Nelly naAlan. Kunyanya, chirevo ndechekuti Kana hama idzi dzikapedza mutambo, baba vavo vanozadzisa chishuwo chavanoda zvakanyanya. Nekudaro, mutambo unovhiringidzwa: mukubwaira kweziso makore makumi matatu apfuura, uye pamwe navo shanduko huru dzinoitika mumhuri.
Pasi (Editions B)
Ya pazera rakura, Nelly inogamuchira bhokisi risinganzwisisike rine nhare mbozha, mhete uye kiyi. Kutenda nharembozha, akasanganazve nemukoma wake (waasina kutaura naye) uye ichatangazve mutambo usina kupera. Ndiwo mukana wemukana wekuti protagonist azadzise zvido zvake, nekuti Alan akange azviwana kare kare.
Panguva imwecheteyo, mutambo uchazobatana ne chokwadi terevhizheni inoratidza iyo ine pasi rese inotarisisa kukura kwayo. Chirongwa ichi chinotenderedza vanhu vasere vanoenda kubva pasi kuenda kupuraneti Mars. Zvichakadaro, kuIceland, Nelly nemunin'ina wake vanodzidza kuburitsa chokwadi pamusoro pekupokana kwevanhu mamiriro epasi riri munjodzi.
Iri bhuku haingotauri chete nyaya yakabatana nevamwe, asi zvakare inoratidzira inogara ichiratidzira mamiriro nezve izvo zvazvino. Saizvozvowo, rondedzero yemaitiro yakarongedzwa muzvitsauko zvipfupi nenyaya dzinochinjika inowedzera kuda kwevaverengi nezvezviitiko zvichaitika pane rinotevera peji. Eloy Moreno zvinopfuura zvinobudirira chinangwa chako che chengetedza muoni pamucheto.
Sezviri pachena, kubheja kwemunyori ndekwekuti muverengi anakirwe nekushomeka kunoiswa mune mbiri mbiri nyaya dzeruzivo. Ndokureva, zvese izvi zvehama mbiri idzi dzinogamuchira vimbiso uye dzinokura dzakasiyana kubva kune mumwe nemumwe, pamwe neizvo zvevatori vechikamu cheterevhizheni. Pakupedzisira, nhoroondo yakajairika muhupenyu hwese ihwohwo huri kuwanikwa zvishoma nezvishoma.
Bhuku nezve izvo zviripo zvevanhu
Nezve kwayo nyowani uye yakanyatso kukwirisa-ku-kudhara maonero Pasi Iri ibhuku rakaoma kuisa pasi mushure mekunge watanga kuverenga. Kubva pane iyi yakavandudzwa maitiro, Eloy Moreno anoedza kuburitsa nyaya iyi nemafomu ekutaurirana anozivikanwa kune veruzhinji vezana ramakore reXXI. Muchinyorwa, chinotarisa chinowira pamamiriro emunhu, chinoonekwa kubva panguva yakatarwa nekubatana.
Pamusoro pe, misoro yakawanda yakaoma inogadziriswa kuburikidza nemusanganiswa -Kutanga kwazvo, nenzira taura chiito uine nharo yakajeka. Misoro yakaongororwa kubva pakukuvara kwezvakatipoteredza kunoitwa nevanhu kupasi, kune hunhu maitiro (sezviri pachena) akaiswa kubva pasocial network.
Chinyorwa chinonakidza chekufungisisa kwakadzama
En Pasi, Eloy Moreno anofumura rondedzero inokwanisa kugadzira kubatikana uye kumutsa kunzwira tsitsi kwevaverengi kuburikidza nevazhinji ins uye maficha - zvinoshamisa, kune chikamu chikuru. Mumwe nemumwe wavo, pane imwe nguva, inova yakakosha nyaya. Sezvo iwe uchigona kuverenga pabutiro rekumashure reruzivo, iwe unoda kutsvaga chokwadi, asi, "dambudziko rekutsvaga chokwadi kuri kuwana uye kusaziva zvekuita nazvo."
Nezvikonzero izvi, ndizvo bhuku rinokukoka iwe kuti uwane hupenyu chaihwo hwevatambi, uye, pamwe nerombo rakanaka, muverengi anofungisisa pane rake. Nenzira iyoyo Pasi naEloy Moreno anoedza kuunza vaverengi padyo nechikamu chakaomesesa chemamiriro emunhu.
Pfungwa pamusoro pebhuku
Vatsoropodzi vanorumbidza kugona kwaEloy Moreno kubata kufarira kwemuverengi, kunyangwe hazvo runyorwa rweinovhurwa rwuratidzwa kutanga. Mamwe manzwi, kune rumwe rutivi, anotaura nezve “Bestseller yakapusa ”, nekuda kweinofungidzirwa (yakapusa) mamiriro ekutengeserana ebhuku. Chero zvazvingaitika, kuongororwa kwese nezve Pasi ndeechokwadi: hooking simba, nyore uye mavambo.
Nezve munyori, Eloy Moreno
Eloy Moreno inyanzvi yehunyanzvi mune manejimendi informatics akazvarwa muna Ndira 12, 1976 muCastelló de La Plana, Valencian Community, Spain. Iye akapedza kudzidza kuJaume I University kumusha kwake. Kunyangwe akapasa kudzidza zvishoma akatanga kushanda mukombuta chikamu, hupenyu hwake hwakatsaurirwa kumabhuku.
Uye 2011, kuda kwake kwakamutungamira kuti apinde munyika yetsamba na kuvhurwa kwebhuku rake rekutanga (rakazviburitsa), Iyo green gel peni. Chinyorwa ichi chakave chisingatarisirwi chakabudirira chinyorwa chekutanga, icho chakabatsira kufambiswa kwemabhuku ake akatevera. Pamwe, kugamuchirwa kwaro pakati peveruzhinji kuri nekuda kwenzira yavo yekunyora yekunyora.
Pashure kuburitswa kwa kutanga kwake, uye kugamuchirwa kukuru nevaverengi, Eloy Moreno yakatora kukurudzira kukuru. Kubva ipapo, munyori wechiSpanish haana kumira basa rake rekunyora, kunyanya nyaya nemabhuku.
Kune rumwe rutivi, munyori ave nemukurumbira -Kunze kwekuvapo kwayo kwakasimba pasocial media-- nekuti akagadzira nzira dzekunyora. Moreno, kaviri kana katatu pagore, anoshanyira vanhu munzvimbo dzaakaisa zvinyorwa zvake. Pamwe chete neizvi, anodzidzisa makosi ezvinyorwa uye mashopu, pamwe nekutora chikamu sedare mumakwikwi emabhuku munyika yake.
Mabhuku aEloy Moreno
Pashure Iyo green gel peni (2011), Eloy Moreno yakabudiswa Zvandakawana pasi pasofa (2013), kumwe kubudirira kwekutsikisa kwakashandurwa mumitauro yakati wandei. Gare gare, munyori weCastellón akadzoka pakushambadzira kwedesktop kushambadza Nyaya dzekunzwisisa nyika (2015), iyo, iyo yakatanga chikamu chechipiri uye chechitatu, muna 2016 na2018, zvichiteerana.
Zvichakadaro, Moreno yakaburitsa yake yechitatu novel muna 2015, Chipo, izvo zvakare zvakaguma mukubudirira izvozvi, kunyangwe iri shoma edition. Saizvozvowo, inoverengeka Invisible (2018) vakawana yakanakisa nhamba yekutengesa. Kwete pasina, ine 19 editions kusvika parizvino neshanduro dzinoverengeka. Dzazvino kubva kuna Eloy Moreno ndizvo Pasi (2020).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Tierra, naEloy Moreno
Arturo Sánchez Sanz. Kubvunzana nemunyori weBelisarius: Magister militum yeEastern Roman Empire
José Calvo Poyato. Kubvunzana nemunyori weLa travesía yekupedzisira